अहिलसम्म कतिले भरे ग्रिनलाईफ हाइड्रोको आइपिओ? – Eps Sathi
अहिलसम्म कतिले भरे ग्रिनलाईफ हाइड्रोको आइपिओ?
February 7, 2021 3185
ग्रीनलाईफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सेयर (आइपिओ) माघ २३ गतेबाट खुलेको थियो। कम्पनीले ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता आइपिओ निष्काशन गरेको हो। कम्पनीको आइपिओमा २७ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिनेछ। पर्याप्त आवेदन नपरेको खण्डमा आइपिओ भर्ने समय फागुन ७ सम्म हुनेछ।
यस कम्पनीले केहि समय पहिला स्थानिय आयोजना प्रभावितहरुका लागि सेयर बेचेको थियो। स्थानीय बासिन्दाको लागि खोलिएको सबै सेयर बिकेको थिएन। स्थानियका लागि खोलिएको सेयरमध्ये ९४ प्रतिशत सेयर बिक्री भएको थिएन। १ हजार २१६ जना स्थानियले मात्र आइपिओ किनेका थिए। ग्रीनलाईफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले १०० अंकित दरको १८ लाख कित्ता शेयर तथा स्थानीय बासिन्दाको लागि बिक्री खुल्ला गरिएको शेयरमध्ये बिक्री नभएका १६ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता शेयर गरी जम्मा ३४ लाख ९६ हजार ४०० साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि अहिले बिक्री खुल्ला भइरहेको छ। ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्तामा सामुहिक लगानी कोष, कर्मचारी पनि समावेश छन्। कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि ६९ हजार ९२८ कित्ता छुट्याइएको छ भने म्युचुअल फण्डहरुका लागि १ लाख ७४ हजार ८२० कित्ता छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको ३२ लाख ५१ हजार ६५२ कित्ता भने सर्वसाधारणले पाउनेछन्। ग्रीनलाईफले दोलखाको मार्बु गाविसमा ४० मेगावाटको खानिखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।
कम्पनीको आइपिओमा आवेदनकर्ताले न्युनतम १० कित्ता तथा अधिकतम १ लाख कित्ताका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन्। अहिले कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४४ करोड रहेको छ। स्थानिय प्रभावित जनता र सर्बसाधारणलाई आइपिओ बिक्री गरिसकेपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८० करोड पुग्नेछ। कम्पनीको इस्यु मेनेजरमा बिओके क्यापिटल रहेको छ।
ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावरको बिक्री प्रबन्धकका अनुसार आज विहान १०.१५ बजेसम्ममा ६ लाख ८२ हजार २२८ जनाले १ करोड २२ लाख ५७ हजार ५६० कित्ताका लागि आवेदन गरिसकेका छन्। यो आँकडालाई हेर्दा माग गरिए भन्दा करिब ३.७६ प्रतिशतले ओभरसस्क्राइब भइसकेको छ। कम्पनीको सेयर ३ लाख २५ हजार १६५ जनाले १०/१० कित्ताका दरले पाउने हुन। यस हिसाबले पनि आइपिओमा माग भन्दा बढि संख्यामा आवेदन परिसकेको छ। अब आवेदन गर्ने लगानीकर्ताहरुले पनि १० कित्ताका लागि आवेदन गर्नु बेस हुन्छ किनभने अब आइपिओ बाँडफाड गोलाप्रथाबाट हुने निश्चित भइसकेको छ।
Prevआफ्नै साथीलाई मा’रे:र उत्तर कोरिया भाग्न खोज्ने श्रीलङ्कन कामदारलाई २० बर्ष जेल सजा’य
Nextनेपाली श्रमिक भित्र्याउन कोरियाले सकारात्मक पहल गर्दै
सउलकै सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोरले खुलेको २ हप्तामै गर्यो रेकर्ड ब्रेकि’ङ ब्यापार
कोरियामा नेपालीको इमान्दारीता, बाटोमा भेटेको १३ लाख एक नेपालीले प्र’हरीलाई बुझाए
मिल्तिखोला हाइड्रोपावर बनाउन कोरियामा उठाएको ११ करोड खोइ?